MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA TARANKA EEYAHA BOSTON TERRIER - EEYAHA
Macluumaadka iyo Sawirada Taranka Eeyaha Boston Terrier
PJ Terrier-ka Boston markuu jiray 3 sano
Liiska eeyaha Boston Terrier Mix Breed
Boston Terriers, oo sidoo kale loo yaqaan Boston Bulls, waa eeyo is haysta oo si fiican u muruqsan. Jidhku waa gaaban yahay oo leh muuqaal laba jibbaaran. Madaxa laba jibbaaran wuxuu ku fidsan yahay dusha sare iyo marka loo eego jirka intiisa kale. Moolka qoto dheer, ballaadhan, gaagaaban ayaa u dhigma madaxa. Sanku waa madowyahay. Joogsiga ayaa si wanaagsan loo qeexay. Qaniinyada ayaa ah xitaa ama xoogaa hoos ah, oo siinaysa muuska muuqaalka laba jibbaaran. Indhaha waaweyn, wareegsan, mugdiga wey ballaadhan yihiin. Dhegaha kacsan ayaa yar oo ama la jarjaray ama laga tegey dabiici. Lugaha waa toosan yihiin waana muruqyo. Lugaha xoogaa wey kala fogyihiin laabta ayaa balaaran. Qoorta ayaa xoogaa qaansoxan. Dabada hoose ee, dabada la duubay ayaa gaaban oo ama toosan ama qaabeysan oo aan waligeed ku xirnayn. Koodhka gaaban, ee wanaagsan ee qaabaysan wuxuu ku yimaadaa shaabad, bir iyo caddaan, madow iyo caddaan qaarna waxay ku dhashaan bunni iyo caddaan.
Terrier-ka Boston waa mid deggan, feejigan, aad u caqli badan, edeb leh oo xamaasad badan. Iyadoo aan lahayn qaddarka saxda ah ee jimicsi maskaxeed iyo mid jireed waxay noqon kartaa mid faafis leh oo xoogaa sarreysa. Waxay aad ugu nugul yihiin codka qofka codkiisa. Boston waxay jeceshahay inay wax barato sidaas darteedna waa ma dhib badna in la tababaro . Sirdoonkoodu wuxuu hubiyaa inay si dhakhso leh wax u soo qaadaan. Haddii aadanaha hareeraha eyga Ha soo bandhigin hoggaanka ay eeyaha oo dhami u baahan yihiin, waxay noqon doonaan kuwa ula kac ah markay bilaabaan inay rumaystaan ​​inay wadaan barnaamijka oo ay u baahan yihiin inay kuu sheegaan waxa la qabanayo. Ha u oggolaan in Boston Terrier uu horumariyo Cudurka Dog yar , dabeecadaha bini'aadanka ee kiciya halka eygu aaminsan yahay inuu yahay hogaamiyaha xirmada aadanaha. Tani waxay sababi kartaa heerar kala duwan oo ah arrimaha dhaqanka . Bostons waxay u baahan yihiin debecsan, laakiin adag, kalsooni leh, hoggaamiye xirmo joogto ah yaa garanaya sida loo muujiyo awooda eyga. Waa dareen dabiici ah in la helo hogaamiye xoog leh ninkan yarna sharciga kama reeban. Ama aadanaha ayaa noqon doona hogaamiyahaas, ama eeyga ayaa noqon doona. Milkiilayaasha qaar waxay soo sheegeen in eeyahoodu yihiin ilaaliyayaal wanaagsan, oo ciyeysa marka loo baahdo oo keliya, halka milkiileyaasha kale ay soo wargeliyeen gabdhahooda Boston Terriers in aysan albaabka ka ciyi jirin haba yaraatee. Inta badan waxaa lagu kalsoonaan karaa carruurta, gaar ahaan waayeelka dadka waayeelka ah iyo saaxiibtinimo badan shisheeyaha, Boston Terrier waa ciyaar, aad u jecel oo jecel inuu ka mid noqdo qoyska. Aad caan uga ah Mareykanka, sababta oo ah waxa ugu sarreeya dabeecaddeeda wanaagsan, guud ahaan waxay si wanaagsan ula wadaagaan xayawaanka aan xayawaanka ahayn. Iyadoo aan la helin hogaan sax ah oo ka timaadda bani-aadamka oo eyga u gudbinaya waxa la aqbali karo iyo wixii aan ahayn, waxay noqon karaan kuwa awood leh oo la dagaallami kara eeyaha kale. Eydan yar ayaa laga yaabaa inay ku adkaato jabka guriga .
Dhererka: 15 - 17 inji (38.1 - 43 cm)
tri midab mini adhijirka Australia
Miisaanka: 10 - 25 rodol (4.5 - 11.3 kg)
U nugul dhibaatooyinka indhaha, sida cataract-yada carruurta, indho-beelka goor dambe, entropion, distichiasis, glaucoma, dystrophy corneal, boogaha maqaarka, isha cherry , indhaha oo qallalan (Keratitis Sicca). Indhaha caanka ah ee Boston Terrier waxay u nugul yihiin dhaawac. Sidoo kale, dhego beelid, raaxo wadnaha, burooyinka wadnaha iyo maqaarka, oo ay ku jiraan burooyinka unugyada . Eeyadan wajiga gaaban waxay yeelan karaan dhibaato xagga neefsashada ah marka ay culeys muujiyaan marka lagu jiro cimilada kulul ama qabow wayna kululeyn karaan haddii aad loo riixo. Waxay sidoo kale ku khuuraan ama ku qubeystaan. Caawinta badanaa way adag tahay miskaha miskaha waa cidhiidhi muruqyada madaxa weyn waxaa badanaa keena qalliinka.
Boston Terriers waxay kufiican tahay guryaha iyo sidoo kale wadan ku noolaanshaha. Iyagu waxoogaa dhaqdhaqaaq ah kuma jiraan gudaha waxayna caadi ahaan ku shaqeeyaan bilaa daarad. Noocani wuxuu xasaasi u yahay cimilada xad dhaafka ah.
KU socod dheer maalin kasta iyo fadhiyada ciyaarta bilaashka ah ee deyrka deyrka kujira ayaa ah dhamaan Terrier-ka Boston wuxuu ubaahan yahay inuu qaab ahaado. Way miisaan fudud yihiin oo si fudud ayaa loo qaadi karaa.
noocyada kala duwan ee soo celinta labrador
Celcelis ahaan 3 - 4 eeyo yaryar ah sabatoo ah noocaan oo ah madaxa weyn, dhalmada qalliinka ayaa aad u badan
Jaakad jilicsan oo gaaban, ayaa si fudud loo hagaajin karaa. Shanlo oo ku caday burush adag oo maydh oo ku maydh markii loo baahdo oo keliya. Ku masax wejiga maro qoyan maalin kasta oo si taxaddar leh u nadiifi indhaha caanka ah. Hubi labada dhegood iyo indhaha iniinyaha cawska. Shilintu sidoo kale waxay ku dhuuman kartaa dhagaha. Ciddiyaha waa in la jarjaraa waqti ka waqti. Noocani waa celcelis daadiya mana laha ur xoog badan oo eyga ah.
Isaga oo ka hooseeya caddadka eyda la dagaallama ee dibiga iyo noocyada teeriga, Boston Terrier-ka markii hore culeyskiisu ahaa 44 rodol (20 kg) ( Olde Boston Bulldogge ). Way adag tahay in la aamino in eydan yar yar ee quruxda badan ay mar ahaayeen dagaalyahanno god-adag. Xaqiiqdii, kala-saarista culeyskooda ayaa mar loo qaybiyey inay yihiin miisaan fudud, mid dhexe iyo mid culus. Asal ahaan ka soo jeeda magaalada Boston, Massachusetts, Boston Terrier waa mid ka mid ah noocyada yaryar ee laga sameeyay Mareykanka. Burburkii asalka ahaa ee Boston waxay ahaayeen iskutallaabta udhaxeysa Ingiriis Bulldog iyo hada bakhtiyey Ingiriisiga Terrier White . Qiyaastii 1865, tababarayaashii ay shaqaaleeyeen dadka hodanka ah ee reer Boston waxay bilaabeen inay isdhaafsadaan qaar ka mid ah eeyaha ay leeyihiin cida ay u shaqeeyaan. Mid ka mid ah iskutallaabtan, oo u dhexeeya Ingiriis Cad oo Ingiriis ah iyo Bulldog Ingiriis ah, waxaa ka dhashay eey magaciisu yahay Hooper's Judge. Garsooruhu wuxuu culeyskiisu ka badnaa 30 rodol (13.5 kg). Isaga oo cabirkiisu yaryahay ayaa dhedig yar oo mid ka mid ah wiilashaas labka ah ayaa loo soo saaray inan yar oo dumar ah. Caruurtooda waxay dhexgaleen hal ama in ka badan Bulldogs Faransiis ah, iyagoo siinaya aasaaska Boston Terrier. Markii la gaadhay 1889 ayaa caanku noqday mid caan ka ah magaalada Boston in fannaaniintu ay samaysteen American Bull Terrier Club, laakiin magacan la soo jeediyay si fiican ugama ay jeclayn dadka jecel Bull Terrier. Sidoo kale ma aysan jeclayn naaneyska naaneyska, 'wareegyada wareega.' Wax yar ka dib, noocaas ayaa loogu magac daray Boston Terrier magaaladii uu ku dhashay. Nooca waxaa aqoonsaday AKC-da sanadkii 1893. Markii ugu horaysay ayaa lagu muujiyay magaalada Boston 1870. Sanadihii hore midabada iyo calaamaduhu muhiimad weyn ma lahayn laakiin 1900-meeyadii ayaa calaamado iyo midab kala sooc ah oo nooc ah lagu qoray heerka. Terrier magaceed oo keliya, Boston Terrier-ka ayaa ka moogoobay eeyaha la dagaallanka ceelkii hore.
Ben the Boston Terrier puppy at 9 toddobaad jir
Kali Terrier-ka Boston markuu jiray 5 sano— Waxaan go aansaday inaanan waligey yeelan eey markale markii Kali yimaado. Mulkiileheedii hore wuxuu ku qasbanaaday inuu si lama filaan ah uga guuro gobolka oo Kali ay u baahan tahay guri. Waxaan go aansaday inaan sii haysto oo kaliya ilaa aan ka helo guri cusub. Taasi waxay ahayd laba sano ka hor. Waxay ka heshay guri cusub isla halkaas aniga. Iyadu ma aha a caadiga ah Boston Terrier. Way aamusantahay oo waxay jeceshahay inay seexato. Cabaar ayey ciyaari doontaa laakiin markaa way daalaysaa oo sariirteeda ayey aadeysaa. Waxay yaqaanaan dhawr tabaha. Waxay jeceshahay waxay fuuleysaa miiskeyga dhererka baararka si ay u xado cuntada. Maaha xeelad aan jeclahay. '
cabirka isku darka shaybaarka Ameerikaanka
Tater Boston Terrier-ka markii uu jiray 7 sano
PJ toddobaadyada 10
Sheeba waa farxadda noloshayda! Aad bay u firfircoon tahay, jecel yahay ku biirista socodka (gaar ahaan xeebta ay ku ordi karto oo ay ku ciyaari karto ciidda), waxay jeceshahay inay ku ciyaarto alaabteeda, laakiin inta badan waxay jeceshahay inay salaaxdo. Waxaan hubiyaa inaan sii wado iyada oo firfircoon, nafaqo leh oo aad loo jecel yahay. '
Waan jeclahay daawashada barnaamijka Cesar Millan maadaama ay iga caawineyso inaan fahmo dabeecadaha qaarkood si loo raadiyo iyo sida loo saxo si loo hubiyo aniga iyo Sheeba inaan labadeenuba faraxsan nahay! Barashada midigta isgaarsiinta eeygaaga waa hab lagu yeesho saaxiibtinimada ugu fiican.
'Kuwani waa ciyaalkeyga Boston Terrier, walaalahay Oliver iyo Clementine (walaalo bidix, walaal midig gadaal) markay jiraan 10 toddobaad. Waxay ku jiraan gurigeenna sagxadda qolka fadhiga. Maaddaama Boston Terriers ay yihiin eeyo qoys oo waaweyn, waxaan rajeyneynaa inaan u adeegsanno sida eeyaha daaweynta. Shaybaarkayaga 3-sano jirka ah oo leh akhlaaq wanaagsan wuxuu adeegsaday awooddeeda iyo dabeecaddeeda dabacsan si uu u sameeyo tababbarka badankiisa eeyo-runti waxay ku daydaan dhaqankeeda wanaagsan. Ma baran inay ku boodaan alaabta guriga iyo inay yimaadaan markay u yeeraan — waxay aadaan meesha shaybaarkayagu tago. Waxaan isku dayeynaa inaan ilaalino tamarta guriga oo isku dheelitiran, maxaa yeelay waxaan ogaanay sida isu dheelitir la'aanta, tamarta walwalka ahi u saameyso annaga iyo kuwa kale eeyaha. Waxaan aaminsanahay xamaasad farsamooyinka Cesar Millan, waxaanan ku dadaalaynaa inaan ilaalino guri farxad leh oo leh xaddid eeyahayaga! Waad ku mahadsantahay dogbreedinfo.com wadaagida sawirro iyo astaamo aad u tiro badan iyo sifooyin dhan oo noocyo kala duwan leh iyo noocyo isku dhafan! '
Daisy midabka buniga iyo caddaanka ee Boston Terrier
Oscar-kii Terrier-ka Boston markuu jiray 2 sano-milkiilihiisa ayaa yidhi, 'Waa nin aad iyo aad u firfircoon Boston. Wuxuu jecel yahay alaabtiisa iyo inuu la ciyaaro Belle, saaxiibkiis Faransiiska Bulldog. '
Zigzag the Boston Terrier at 2 years - milkiilaheeda ayaa leh, Iyadu waa eey caqli badan. Waxay taqaanaa ilaa 30 khiyaanooyin kala duwan, sida qoob ka ciyaarka iyo fuulista skateboard. '
Buddy Terrier-ka Boston markuu jiray 1 sano
Eeg tusaalooyin dheeri ah ee Terrier-ka Boston
Boston Terrier Sawirada 1
Boston Terrier Sawirada 2
Boston Terrier Sawirada 3
Boston Terrier Sawirada 4
Boston Terrier Sawirada 5
Boston Terrier Sawirada 6
Eyda Boston Terrier: Sawirro guryo urursi ah oo la ururin karo
muxuu u eg yahay labrador qalin ah
eey buurta bernese isku darka collie soohdinta
madow iyo tan sawiro coonhound
adhijirka Jarmalka iyo bulldog faransiis